सावधान ! यसरी घुम्दैछन् काठमाडौंमा अप’हर’णकारी, प्रहरीले सर्तकता अपनाउन गर्यो आग्रह – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/सावधान ! यसरी घुम्दैछन् काठमाडौंमा अप’हर’णकारी, प्रहरीले सर्तकता अपनाउन गर्यो आग्रह
काठमाडौं । लकडाउनका समयमा कम भएका अ प रा ध केही बढ्न थालेको जस्तो देखिएको छ । अझ काठमाण्डौंमा अप’हर’णको घटना देखिनुलाई प्रहरीले अनौठो रुपमा लिएको छ ।
आज प्राप्त एक् समाचार अनुसार, काठमाण्डौमा एक व्यक्तिको अप’हर’ण प्रयास प्रहरीले असफल पारेको छ । टोखाबाट अप’हर’णमा परेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको हो । प्रहरीका अनुसार रामबाबु साह नाम गरेका व्यक्ति अप’हर’णमा परेका थिए ।
महानगरीय अ’प’राध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाका अनुसार साहलाई लोकन्थलीको नरेफाँटबाट सशुकल उद्धार गरिएको हो । थापाले अप’हर’णमा संलग्न ७ जनालाई समेत पक्राउ गरेका बताए ।
२५ लाख रुपैयाँ लेनदेनको मामिलामा साहलाई अप’हर’ण गरिएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको प्रहरीले बताएको छ । अप’हर’णकारीले साहका छोरालाई फोन गरेर ‘२५ लाख रुपैयाँ लिएर आउन र बुबालाई फिर्ता लैजान भन्दै’ फोन गरेका थिए ।
उक्त फोनपछि साहका छोराले प्रहरीलाई सम्पर्क गरेका थिए । प्रहरीले पैसा बुझाउन जाने बाहनामा साहको सकुशल उद्धार गर्न सफल भएका हुन् । प्रहरीले छिट्टै थप जानकारी दिने बताएको छ ।
यो अर्को समाचार, कारवाहीमा परे पन्ध्र हजार सवारी साधन
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नुवाकोटकले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु एक करोड ५८ हजार राजस्व उठाएको छ । अघिल्लो आव २०७५÷७६ को तुलनामा रु ५१ लाख राजस्वमा कमी आएको छ । सोे आव २०७५÷७६ मा जरिवाना राजस्वमा १ करोड ५१ लाख २६ हजार राजस्व उठाएको थियो भने गत आव ०७६÷७७ मा एक करोड ५८ हजार मात्र उठेको कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक विकल भट्टराईले बताउनुभयो ।
उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कारवाही गरिएकोमध्ये जरिवाना राजस्वमा ५१ लाख कमी छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष राजस्व र कारवाही सङ्ख्यामा कमी आउनुको मुख्य कारण लकडाउन रहेको जनाइएको छ । उनी भन्छन्, “कोरोनाका कारण दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्गे्र सवारी साधनको रुट परमिट नभएका, ब्लुबुक फेल भएका, चालक अनुमतिपत्र फेल भएका साधनलाई कारवाही गर्न समयमा लकडाउन हुनुका साथै सवारीसाधन गुड्न नपाएको हुनाले त्यसैकारण पनि गत वर्ष हेरी अहिलेको समयमा राजस्व र कारवाही सङ्ख्यमा कमी आएको हो ।”
गत आवमा ट्रक तीन, टिपर दुई, बस दुई, कार, जिप एक तथा मोटरसाइकल १५ दुर्घटनामा परेका थिए । प्रनानि भट्टराई भन्छन्, “गत वर्षको सवारी दुर्घटनामा परी निधन हुने ११ जना, ग’म्भीर घाइतेको सङ्ख्या १६, सामान्य घाइतेको सङ्ख्या नौ गरी जम्मा दुर्घटना सङ्ख्या १९ रहेको छ ।”
अघिल्लो आवमा सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्कअनुसार जम्मा सवारी दुर्घटना–२३ निधन हुनेको सङख्या–४१, ग’म्भीर घाइते हुनेमा २९, समान्य घाइते हुनेमा १६ रहेका थिए । गत आवको तथ्याङ्कअनुसार सवारीसाधनको रुट परमिट नभएका, ब्लुबुक फेल भएका, लाइसेन्स फेल भएका र नभएका गरी विभिन्न सवारीसाधन गरी १४ हजार ७३१ मध्ये लकडाउनको समय चैतदेखि असारसम्मको तथ्याङ्कमा कारवाही सङ्ख्या एक हजार ७८१ रहेका छन् । ती साधनबाट ११ लाख ९६ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको थियो । गत वर्ष ०७५÷७६ मा कारवाहीमा परेका २२ हजार ६५६ साधनबाट राजस्व ४६ लाख ७१ हजार ५०० उठेको थियो ।